Jilaaga Jack McBrayer ayaa barnaamij caruura ku yeelan doona Apple TV + | Waxaan ka socdaa mac
Jilaaga Jack McBrayer oo barnaamij Caruur ku leh Apple TV +
Apple wuxuu sii wadaa ballaarinta nuxurka kuwa yaryar oo kaliya heshiis la galay jilaa Jack McBrayer si uu u abuuro bandhigga Waad salaaman tahay, Jack, Showga naxariista loogu talagalay Apple TV +, sida laga soo xigtay Noocyada kala duwan. Barnaamijkan waxaa ka soo muuqan doona xidigo marti ah oo ka caawiya caruurta xalinta dhibaatooyinka asluubta iyo naxariista.
Abuuraha silsiladda waa jilaaga laftiisa, jilaa Loo yaqaan taxanaha majaajilada NBC 30 Rock, taas oo uu ku ciyaaray doorka Kenneth Parcel, door uu ku kasbaday magacaabista Emmy ee 2009, abaalmarino uu sidoo kale u magacaabay taxanaha shabakadda 30 Rock: Kenneth Websaydhka y Wejigaaga Qurxoon wuxuu ku socdaa Naar (waxaa laga heli karaa HBO).
Jack McBrayer wuxuu ku caanbaxay barnaamijka Habeen Dambe Conan O'Briean iyo ayaa codkiisa amaahiyay tiro badan oo taxane ah oo xamaasad leh sida Phinneas iyo Ferb, Afka Ba'an iyo filimka Jebi jab, Filim loo magacaabay Oscars-ka 2012 qeybta filimka filimka 'Animated Best'.
Waxa weheliya Jack McBrayer, wuu taagan yahay Angela Santomero oo ah abuuraha taxanaha. Calaamadaha Buluugga (Blue's Clues in English) waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu caansan ee Angela ee Nickelodeon. Waxa kale oo uu ka qayb qaatay taxanaha Super Sababta, Xaafada Daniel Tiger y Galay hal abuur leh kuwa kale.
Taxanahan cusub waxaa soo saari doona 9 Story Media Grupo (ku guuleystey dhowr Emmy Awards) iyo istuudiyaha Brown Bag Films, oo dhowr jeer loo magacaabay Abaalmarinta Akadeemiyada ee Hollywood. Wendy Harris iyo Vince Commisso waa, oo ay weheliyaan Jack McBrayer iyo Angela Santomero soosaarayaasha fulinta.
Xilligan lama oga goorta Apple loo qorsheeyay inuu ka soo muuqdo Apple TV + nuxurkan cusub ee loogu talagalay kan ugu yar guriga. Haddii aan tixgelinno taas, aragti ahaan, waxaa lagu toogan doonaa telefishanka, waxay u badan tahay in la heli doono ka hor dhammaadka sannadkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Jilaaga Jack McBrayer oo barnaamij Caruur ku leh Apple TV +
MWC-da sanadkaan wuxuu qof walba albaabadiisa ufurayaa isagoo tikidho kahelaya € 21
Horumariyaha ugu horreeya ee betas ee iOS 14.7, iPadOS 14.7, tvOS 14.7, watchOS 7.6, iyo macOS Big Sur 11.5